Howlan maktabadda waa abuurista nuqul ka mid ah playlist si dhexdhexaad kaydinta kale. Qalabka iPhone waafajinta karaa maktabadaha kale Lugood, dayanayaan faylka si qalab kale ama qeybsanaan. Waxaa jira qaar ka mid ah waxyaabaha la qaadaa si loo tixgeliyo marka howlan maktabadaha.
Waafajinta faylasha maktabada iyo lumin xogta qaar ka mid ah
Waa arrin caadi ah in dhacdaa in dad badan ayaa marka ay howlan maktabadaha Lugood. Mar kasta oo user a isku xira qalab uu computer fariin deg deg ah u muuqataa in Ha aad rabto in aad masixi this iPhone iyo oolin marka maktabadda Lugood? Haddii baxa qofka, dhammaan xogta ku jirtay oo uu iPhone waa Khasaarteen. Si looga fogaado laga badiyay ka mid ah macluumaadka waa in ay isticmaalaan codsi xisbiga saddexaad tan iyo tufaax kuu ogolaanayaa oo kaliya user waafajinta la mid maktabadda ugu go a.
Ma doonayo in xogta mid ka mid ah maktabadaha kale Lugood
Mararka qaarkood dadka ku xidhi doonaa qalab ay ay PC aan ujeeddo kasta oo ka mid howlan files maktabadda. In kasta oo ay muhiim u tahay in waafajinta qalab aad, laakiin howlan dhammaan xogta laga yaabaa in mararka qaarkood mid aan loo baahnayn doonayaan karaan in ay doortaan shaqsi files gudaha gal ah in ay waafajinta karo. Taas waxaa la samayn doonaa inta badan ay la qabsashada iyo dhajinta files in aad rabto in aad waafajinta. Habka in mid ka mid raaci doona uu noqon doono bartey farsamo, laakiin waxaa laga yaabaa fudud qof aqoon u leh qalabka iPhone.
Ma doonayo in aan u hagaagsan xogta qaar ka mid ah iPhone maktabadda kale Lugood
Marka qalab ku xiran warbaahinta kale oo ka mid ah waxay go'aansan karaan in aan diro ama la helo wax files intii lagu howlan qalabka mid laga yaabaa inaad cusboonaysiiso nidaamka qalliinka si hal dooran kartaa in aan waafajinta. Mid ka mid ah sidoo kale laga yaabaa inay isticmaalaan waxyaabaha xisbiga saddexaad oo uu u sahli doono in uu fuliyo hawsha in ay doonayaan oo aan howlan loo baahdo.
Nidaameed iPhone la maktabadda kale Lugood
Mid ka mid ah dooran kartaa in aad kaarka SD inay u dhaqmaan sida waddada u hagaagsan default for files wareejiyo qalabka android. Mid ka mid ah waxaa laga rabaa in raac tallaabooyinkan fudud.
Tallaabada 1 . Riix dejinta on TunesGo.
Tallaabada 2 . dooranaysaa SD dibadda ee goobta dekedda u hagaagsan, markaas badbaadin isbedelada.
Waxaa waajib ah in aan ka mid doorteen SD dibadda inay u dhaqmaan sida Jidka caadiga ah marka u hagaagsan. User ayaa dooran karaan in ay doortaan android guud ahaan sida Jidka, user la rabaa in ay:
Tallaabada 1 . Dooro goobaha on TunesGo ka dib markii laga bilaabo codsiga.
Tallaabada 2 . Input oo dhan waddooyinka fayl ah ay ku jiraan file kasta ee guddiga Jidka nidaameed.
Apple oo u ogolaanaya dadka isticmaala si ay u waafajinta qalab mid kaliya la maktabadda Lugood ah. Isticmaalka TunesGo kuma saabsana habka dheer si ay awood qalab kale oo si hagaagsan duwan oo isku dayaya gacanta; mid u baahan doontaa in la raaco habka fudud:
Connect TunesGo la tirada qalabka aad haysato oo markaas waxaad iyaga ku toggle karaa raaxaysateen. Qofka waa in uu leeyahay TunesGo midkood version buuxa ama version tijaabo si ay qaban karaan shaqo ah.
> Resource > Lugood > Sidee u hagaagsan iPhone la maktabadda kale Lugood